प्रमुख र मुख्यमन्त्रीको कार्यालय मर्मतका लागि सात करोड - विवेचना
प्रमुख र मुख्यमन्त्रीको कार्यालय मर्मतका लागि सात करोड
February 2, 2018 1,925 Views
पथरी । प्रदेश नम्बर १ मा प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुख र उपसभामुखको कार्यालय भवनको मर्मतका लागि सात करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेश कार्यालय र मन्त्रालय रहने भवनको मर्मत-सम्भारसहित अन्य कामका लागि साढे सात करोड बजेट आएको सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयका प्रमुख श्यामकिशोर सिंहले बताए । प्रदेश नम्बर १ को अस्थायी राजधानीको संरचना मर्मतका लागि राज्यले सात करोड बजेट विनियोजन गरेको हो ।
कार्यालय प्रमुख सिंहले दिएको जानकारीअनुसार विनियोजित बजेट मध्येबाट पाँच करोड रुपैयाँ कार्यालय मर्मत-सम्भार शीर्षकमा आएको हो । मन्त्रालयको फर्निचरका लागि एक करोड ५० लाख रुपैयाँ तथा कम्पाउण्ड, पार्किङलगायत बाहिरी संरचना मर्मतका लागि एक करोड रुपैयाँ बजेट आएको छ । मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद आचार्यका अनुसार बजेटबाट कार्यालय मर्मतको काम सुरु गरिएको हो ।
आचार्यका अनुसार मन्त्रालय रहने भवनमा रहेका सरकारी अड्डाको व्यवस्थापनको काम पनि सुरु गरिएको छ । मुख्यमन्त्री र प्रदेशका प्रमुख सचिव रहने क्षेत्रीय कृषि कार्यालयलाई भुइँतल्लामा सारिने बताइएको छ । पहिलो र दोस्रो तल्ला प्रदेश सचिव र मुख्यमन्त्रीका लागि छुट्याइएको हो । पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय पशु सेवा कार्यालय जिल्लामा सार्ने तयारी गरिएको आचार्यको भनाइ छ ।
उनका अनुसार प्रदेश प्रमुखको कार्यालय सार्नेगरी क्षेत्रीय वन निर्देशनालयको भवन खाली गरिएको हो । प्रदेशको अस्थायी मुकाम घोषणापछि क्षेत्रीय पशु सेवा कार्यालयमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालय राखिएको थियो । तर, सो भवन सानो भएपछि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई क्षेत्रीय वन निर्देशनालयमा सार्न लागिएको छ । प्रदेश प्रमुखका लागि क्षेत्रीय वन कार्यालयको दोस्रो र तेस्रो तल्ला खाली गरिएको छ । पूर्व क्षेत्रीय वनको कार्यालय भुइँतल्लामा राखिने बताइएको छ ।
त्यस्तै, मुख्यमन्त्री रहने क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालयको कामकाज पनि भुइँतल्लाबाट सुरु गरिएको छ । आचार्यका अनुसार प्रदेशसभा बैठक बस्ने जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय तेस्रो तल्लामा सारिनेछ । प्रदेशसभाको पहिलो बैठक यही माघ २२ गते बस्नेछ ।
Previous छमछमीबाट बाहिरिए एलेक्स
Next कमल गाउँपालिकालाई बालमैत्री बनाइने
Pingback: 15 iyunya 8278
Pingback: trah_net_621 huj tv
Pingback: ringworm symptoms dogs
Pingback: znamenatelnye sobytiya7iyulya
Pingback: Prazdniki s 1 avgusta po 18 noyabrya
Pingback: can you download youtube videos to mp3
Pingback: sirius latest movs71652
Pingback: latestvideo sirius500 abdu23na8469 abdu23na68
Pingback: new siriustube226 abdu23na5124 abdu23na43
Pingback: tubepla373 afeu23na9490 abdu23na91
Pingback: tubepla994 afeu23na9023 abdu23na90
Pingback: tubela.net586 afeu23na8627 abdu23na59
Pingback: cars comprehension
Pingback: martin luther king tesina
Pingback: radiohead no surprises perevod
Pingback: Used Misc. Lab Equipment by Biorad at used-line
Pingback: prosnulsja vo sne
Pingback: healthline wiki
Pingback: linux admin job description
Pingback: муниципализация земли
August 16, 2017 38,022
August 19, 2017 9,305
March 13, 2018 8,677
Smo-King: Smo-King [...]usually posts some really interesting stuff like this. If youre n...
Vaporart: Vaporart [...]Wonderful story, reckoned we could combine several unrelated data,...
Smo-King: Smo-King [...]very few internet websites that come about to be comprehensive bel...
Vaporart: Vaporart [...]please visit the web pages we stick to, like this one particular,...
Svapo: Svapo [...]check below, are some absolutely unrelated internet websites to ours,...
दु:खका पहाडले थिचिएकी सनमाया - विवेचना https://t.co/0DtC4lq4B415 hours ago
करिअरको नवौं लिग बिबिएल खेल्दै सन्दीप लामिछाने - विवेचना https://t.co/mo6A7iXes215 hours ago